Fantaro raha azo atao ny manana fifandraisana lavitra | Bezzia
Fifandraisana lavitra, miasa ve izy ireo?
Fanontaniana iray apetraky ny olona amin'ny tenany izany, satria tsy maintsy manalavitra ny tenany izy ireo na inona na inona antony. Amin'ny ankapobeny, matetika ny fanalavirana dia noho ny asa na satria ny olona iray hafa dia tsy maintsy manova ny adiresiny. Nefa mbola betsaka ny ankehitriny fifandraisana lavitra satria maro ny olona mivory amin'ny Internet ary tsy mipetraka eo akaiky eo.
Ka samy mandinika ny mety hisian'ny fifandraisana lavitra miasa satria mahatsapa zavatra ho an'io olona io izy ireo. Misy torolàlana vitsivitsy hanatsarana ireo fifandraisana ireo, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy mora izy ireo, satria manasarotra ny fifandraisana ny halavirana.
1 Olana sy fatiantoka amin'ny fifandraisana lavitra
2 Ahoana ny fanatsarana ny fifandraisana lavitra
Olana sy fatiantoka amin'ny fifandraisana lavitra
Na dia ny fitiavana aza dia zavatra iray izay mahatonga antsika hino fa mahavita ny zavatra rehetra isika, indraindray tsy izany no izy. Betsaka ireo olana mifandray amin'ireo fifandraisana lavitra ireo. Ny iray amin'izy ireo dia ny tsy fahampian'ny fifandraisana amin'ilay olona iray hafa. Na manao ahoana na manao ahoana fitiavana antsika dia ilaina ny manohina sy mahatsapa ilay olona hafa mba hisian'ny fifamatorana ara-pihetseham-po bebe kokoa. Raha tsy izany dia hampangatsiaka ny fifandraisana ny halavirana noho ny tsy fisian'ny fifandraisana ara-batana.
Olana lehibe iray hafa koa mipoitra dia ireo fifandraisana ireo tsy misy firaisana ara-nofo ary ny firaisana ara-nofo dia ampahany tena lehibe amin'ny mpivady. Raha tsy mandeha io dia mety tsy handeha amin'ny laoniny ny fifandraisana. Vao mainka mampatahotra izany raha lavitra ny fiarahana ary tsy mifankahita izy roa.
ny fialonana amin'ity karazana fifandraisana ity dia matetikaTsy manana ilay olona akaiky hahafantatra izay ataony izy na hahafantatra raha tena manohy mahatsapa izany izy. Izany dia mameno antsika amin'ny fisalasalana sy fisalasalana, izay mazàna midika fialonana raha toa ka manalavitra ny tenany na mahafantatra olon-kafa ny olona iray hafa.
Ao amin'ireny ny fifandraisana eo koa ny olan'ny tsy fanoloran-tena. Betsaka ny olona mahita fa mahazo aina amin'ny fiarahana lavitra ary mahita olona iray indray mandeha fotsiny satria tsy te hilefitra.
Ahoana ny fanatsarana ny fifandraisana lavitra
Amin'ny fifandraisana lavitra dia ilaina izany mifandraisa ara-batana indraindray. Izany dia manampy antsika hahatsapa ilay olona hafa ary hahafantatra raha tena mbola mahatsapa izany izy ireo. Ankoatr'izay, amin'ny fifandraisana izay natomboka tamin'ny Internet izay mbola tsy mifankahalalan'ny olona dia tena ilaina ny mifankahita mivantana. Tokony ho fantatrao foana raha manana an'io fisarihana io izay mipoitra voajanahary eo anelanelan'ny roa isika. Mety mila olona isika fa na tsapantsika fa hafa ny manintona azy. Izay no antony tsy maintsy hihaonanao indraindray ary ezaho atao ny mifankahita.
La Tena ilaina tokoa ny serasera amin'ity karazana fifandraisana ity. Tsy afaka mifankahita isan'andro isika ary tena sarotra ny mahafantatra momba ilay olona iray hafa. Raha tsy maharitra io elanelana io dia mora kokoa ny mitondra azy, fa raha tsy izany dia mety hitsahatra tsy hifandray amin'ilay olona hafa isika amin'ny farany. Raha mifampiresaka sy mifampiresaka ny zavatra manandanja indrindra isika dia ho fantatsika fa afaka matoky an'io olona io isika ary miahy antsika izy ireo. Tena ilaina ny mifampiresaka sy maneho fahalianana amin'ny olon-kafa mba hitazomana ny fifandraisana.
La ny fifampitokisana dia tokony ho andry amin'ity karazana fifandraisana ity. Rehefa lavitra, ny fifandraisana dia mety hiteraka fisalasalana, satria tsy fantatsika izay ataon'ny olona hafa. Izany no antony tsy maintsy itokisantsika ary ny hafa matoky antsika na ny aloky ny fialonana dia mety hanimba ny zava-drehetra, na dia tsy misy antony tokony hialonana aza.
Ka raha manana fifandraisana lavitra ianao ary tianao hiasa io dia tadidio ao an-tsaina ireo lafin-javatra ireo. Ahoana ny hevitrao momba io karazana fifandraisana io?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Fifandraisana lavitra, miasa ve izy ireo?
Paikady matanjaka hiaraha-miasa amin'ny zanakao ao an-trano
Ahoana ny fisafidianana ny borosy volonao